Ny pterostilbene Powder dia mahasoa amin'ny maha-Nootropics sy ny fanabeazana anti-antitra dia simika simika Shangke
Ny pterostilbene Powder dia mahasoa toy ny fanampin'ny Nootropics sy ny Anti-Aging supplement
1. Inona ny Pterostilbene?
Pterostilbene dia simika zava-mahadomelina voajanahary mandritra ny androm-piainan'ny zavamaniry sasany mba ho fiadiana amin'ny aretina. Ity famolavolana ity dia mitovy amin'ny sangan'asa iray hafa fantatra amin'ny hoe resveratrol ary mora ampiasaina amin'ny endrika fanampiny. Ny famatsiana Pterostilbene dia be bioavibo be. Midika izany fa mora mason-dry zareo ho ao anaty vatana mora sy haingana izy ireo ary tsy voaloton'ny fizotran'ny fitrandrahana. Ny vovobony Pterostilbene dia mandaitra, saingy fohy ny antsasaky ny androm-piainany satria latsaky ny 100 minitra.
Loharano sakafo Pterostilbene
Pterostilbene loharanom-tsakafo dia ahitana blueberry, almonds, cranberry, mulberi, voanjo, divay mena, voaloboka mena, ravina voalavo, ravina hazo ratsy amin'ny India, raitra mena ary kakao. Ny Blueberry kosa anefa, loharano sakafo Pterostilbene avo indrindra, fa ny habetsaky ny blaeberry dia mbola kely raha ampitahaina amin'ny sotro Pterostilbene. Ny votoatin'ny Pterostilbene blueberries dia inoana fa manodidina ny 99 ka hatramin'ny 52 nograma, ao anatin'ny blueberries rehetra grama.
2.Ny mekanika pterostilbene
Ny mekanika pterostilbene amin'ny hetsika dia hafa noho ny resveratrol. Ny tamboho pterostilbene no stilbene mahery indrindra. Ny tombontsoa azo avy amin'ny vovobony Pterostilbene samihafa dia mifanentana amin'ny mekanika hetsika hafa. Ny hetsika pharmacological amin'ny trans-pterostilbene dia ahitana antineoplastic, antioxidant ary anti-inflammatory.
Pterostilbene dia mampiseho hetsika antifangal mahomby izay im-bolo mahery noho ny resveratrol. Ny famokarana pterostilbene koa dia misy fiantraikany antivirus. Ny fiarovana ny zavamaniry amin'ny pathogens maro dia toa mekanika ilaina amin'ny stilbenes, ao koa ny Pterostilbene, ary ireo hetsika ireo dia miitatra amin'ny biby sy ny olona koa.
Pterostilbene koa dia misy fiantraikany anticancer amin'ny alàlan'ireo mekanika molekoly maromaro. Ny fikarohana fikarohana Ny hetsika Pterostilbene dia ahitana ny fototarazo suppressor, ny fanodinana ny làlan-kizan'ny famindrana famantarana, oncogenes, gen de diffusiones sela, ary ny fitsipiky ny tsingerin'ny sela.
Ny fananana Antioxidative amin'ny Pterostilbene dia tsy mitovy amin'ny resveratrol. Ao amin'ny resveratrol, ny vondrona hydroxyl telo dia manala ny ROS (karazana oksizenina mahery vaika) amin'ny lymphoblasts mitoka-monina sy ny ra iray manontolo raha Pterostilbene, izay manana vondrona hydroxyl 1 ary vondrona methoxy 2 dia mihena ROS extracellular. Ny fametrahana ny fananana antioxidation dia ahafahan'ny fampiasana Pterostilbene vovoka mikendry ireo karazana oksizenina reaktif extracellular, izay miteraka fahasimban'ny ratra mandritra ny fanaintainan'ny taova.
Eto ambany ny fiasan'ny pterostilbene betsaka izay resahina amin'ny antsipirihany;
Ny mekanika pterostilbene; Sirtuin activation
Ny Pterostilbene dia manentana ny làlana famantarana famantarana SIRT1 ao amin'ny sela izay miaro amin'ny fahasimban'ny sela, ka izany no mampihatra azy. Io lalana io dia manandratra fitenenana p53. Ny P53 dia proteinina miaro ny DNA amin'ny fahasimbana ary miaro ireo sela amin'ny fihenam-bidy izay mety hiteraka homamiadana.
SIRT1 afaka misakana anao amin'ny fahasimban'ny fahasimban'ny sela izay mihalehibe rehefa mihalehibe ianao.
Ny fiadiana amin'ny aretina mandratra
Fandinihana maro no naneho fa ny sôkômbra pterostilbene simika dia mampihena ny fihenan-dalitra izay alain'ny TNF-alpha (tumor necrosis factor-alpha). Ny adin-tsaina mitondra oksizenina dia miteraka ratra; Pterostilbene dia manakana ny interleukin-1b sy TNF-alpha amin'ny alàlan'ny fihenan'ny karazana oksizenina mahery vaika.
Miompy amin'ny fihenjanana ao anaty ampahany amin'ny milina sela izay fantatra amin'ny hoe ER (endoplasmic reticulum) io famonon-tena io. Tamin'ny fikarohana iray, rehefa niseho ny vovobony Pterostilbene ny lelan'ny sela, dia tsy nihaino ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny aretiny ny lalany, ary tsy hita ilay aretina.
Ny mekanika pterostilbene; Vokatry ny homamiadana
Mahagaga fa na dia mampihena ny fihenan-tsasatra ER (endoplasmic reticulum) ao amin'ny làlan-drà misy ra, ny Pterostilbene dia manamafy ny adin-tsaina amin'ny retetika endoplasmika ny sela homamiadana. Izy io dia manimba ny sela homamiadana ary miaro amin'ny adin-tsaina amin'ny oxidative amin'ny sela salama.
Ao amin'ny sela homamiadana spinal na atidoha (glioma), ny Pterostilbene dia mampihena Bcl-2 ary manainga Bax; Ireo fanovana ireo dia manentana ireo famantarana “famonoan-tena” sela nahatonga ny sela amin'ny hazondamosina na atidoha.
Ny sela homamiadana dia mampiasa lalana iray fantatra amin'ny anarana hoe Notch-1, hisorohana ny tenany amin'ny hetsika fanafody simika, anisan'izany ny oxaliplatin sy fluorouracil. Hatramin'ny Pterostilbene dia manakana ny fivontosana ho tsapa kokoa amin'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny chimiothérapie ny pterostilbene
Ny Pterostilbene dia manamaivana ny famokarana sangan'asa mampiroborobo ny homamiadana maromaro, ao anatin'izany ny MUC1, b-catenin, Sox2, NF-κB, ary CD133. Ireo vokatra mitambatra ireo dia mampihena ny fivontosana ary mahatonga azy tsy ho sarotra amin'ny fitomboan'ny sela homamiadana.
Pterostilbene dia afaka mametraka ny faritra hippocampus voafantina tsara ao amin'ny ati-doha. Eto, dia mampiroborobo ny CREB (proteinina singa mifototra-tsindry), BDNF (factor neurotrofika avy amin'ny atidoha), ary MAPK (kinase proteinina mihetsika mihetsika,
Ny proteinina telo dia manampy ny neuron amin'ny fampitomboana sy fitomboana ary ny famaliana mahomby amin'ny manodidina azy. Mikendry antidepresanina SNRI ireo lalana ireo.
Ny Pterostilbene koa dia mampisy proteinina fantatra amin'ny hoe Nrf2 ao amin'ny hippocampus, izay mampirongatra ny fanehoana proteinina antioxidant.
Ny Pterostilbene dia manakana ny vatana amin'ny aretina Alzheimer amin'ny fanomezana fiarovana ny atidoha amin'ny beta-amyloid (Aβ). Manao izany izy amin'ny fampidirana Akt sy PI3K, proteinina roa izay manohana ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena, sy ny fitadidiana ary ny fianarana.
3. Mahasoa ny vovobony Pterostilbene
Ny resadresaka manaraka no zava-dehibe telo pterostilbene vovoka soa;
Rehefa mihalehibe isika dia ny foto-pisainana vaovao dia miha sarotra kokoa amin'ny fananganana, ary lasa sarotra kokoa ny hidirana fahatsiarovana. Ny tsy fahaizana manatanteraka asa ara-dalàna mahazatra dia mihena koa. Ny fanampin-tsakafo Pterostilbene dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo rivo-piainana efa mihatsaravelatsihy koa na firy taona na firy.
Pterostilbene dia nootropic mahery, izay manampy amin'ny fialan-tsasatra amin'ny saina sy ny fampivoarana ny fahalalana. Izy io koa dia alaina matetika mandritra ny pre-workout noho ny fahafahany manampy amin'ny vasodilation amin'ny lalan-drà. Izy io àry, dia manolotra fiantraikany mitovy amin'ny fanafody hafa manangona oksizenina.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny pterostilbene nootropic dia inoana fa vokatry ny fahafahany mivoatra ny haavon'ny dopamine. Amin'ny rodents, Pterostilbene dia nampihena ny tebiteby ary nanatsara ny toe-po. Ao anatin'ny fikarohana iray izay misy zokiolona, ​​ny sela pterostilbene dia nanangana haavo dopamine ary nanatsara ny fahalalana. Ary rehefa vita ny Pterostilbene dia hita ao amin'ny hippocampus an'ny atidoha, dia mihatsara ny fitadidiana azy.
Ao amin'ny fandinihana iray hafa momba ny voalavo, ny Pterostilbene dia nanatsara ny fitomboan'ny sela vaovao koa amin'ny hippocampus. Nihanaka haingana ihany koa ireo sela nisy nalaina avy tamin'ny atidohan'ireo totozy tanora rehefa nahatratra Pterostilbene.
Araka ny fikarohana momba ny sela dia manakana ny MAO-B (monoamine oxidase B) ny vovony pterostilbene ary mampisondrotra ny dopamine hita ao am-pontsika. Io hetsika io dia mitovy amin'ny zava-mahadomelina izay mitsabo ny aretin'i Parkinson, toy ny rasagiline, safinamide, ary selegiline. Ao amin'ny fikarohana iray, Pterostilbene koa dia miaro ny neuron amin'ny fahasimban'ny mifandray amin'ny AD (Alzheimer aretina).
Ny fifehezana ny tebiteby amin'ny pterostilbene dia inoana koa fa vokatry ny fahaizany manakana ny monoamine oxidase B. Amin'ny fanadihadiana iray manokana dia Pterostilbene dia naneho ny hetsika anxiolytika tamin'ny fatra roa sy iray mg / kg. Ity fiaraha-miasa anxiolytika ny sôkôla ity dia mitovy amin'ny diazepam amin'ny iray sy roa mg / kg ao amin'ny EPM.
II. Pterostilbene ary matavy loatra
Ny fanadihadiana iray dia nanadihady ny fahaizan'ny Pterostilbene hitantana ny hatavezana dia mampiseho fa misy fifandraisan-doha lehibe eo anelanelan'ny fanampina pterostilbene sy ny fitantanana lanja. Nino ireo mpahay siansa fa ny vovobony Pterostilbene dia misy fiantraikany amin'ny fihenan'ny tafo matavy noho ny fahafahany mihena lipogenesis. Lipogenesis no dingana hamoronana sela matavy be loatra. Pterostilbene koa mampitombo ny fandoroana tavy na na fihenan'ny fitrandrahana ao amin'ny atiny.
Tamin'ny fikarohana natao momba ny olona antitra izay manana kolesterola avo dia misy vondron'olona mpandray anjara tsy mitondra zava-mahadomelina kolesterola very lanja mandritra ny fihinanana pterostilbene. Ireo vokatra ireo dia nanjary nanaitra ny mpikaroka satria ity fikarohana ity dia tsy natao handrefesana ny pterostilbene fanampiny ho fanampiana fanampiana amin'ny fihenan-danja.
Ny fandinihana biby sy sela koa dia mampiseho fa ny famolavolana pterostilbene dia mety hanamafy ny fahatsapana insuline. Ny ataon'i Pterostilbene dia manakana ny fizotran'ny fatran'ny siramamy ho fangaro izany. Tsy misakana ny sela matavy tsy hitombo sy hihamaro izany.
Pterostilbene koa dia manova ny famenosana ny tavy flora ao anaty tsina ary manampy amin'ny fandevonan-kanina ny sakafo.
Ny rodents izay nomena sakafo miaraka amin'ny Pterostilbene dia manana valan-tsavony mahasoa kokoa ary manentana be ao Akkermansia muciniphila. A. muciniphila dia bakteria hita fa miaro amin'ny fivontosana ambany lenta, ny hatavezana ary ny diabeta. Io bakteria io dia lasa fifantohana lehibe amin'ny fikarohana probiotic tato ho ato.
III. Pterostilbene Mampiroborobo ny halavola
Ny tombontsoa azo avy amin'ny pterostilbene anti antitra dia mifandray amin'ny simika bioactive fantatra amin'ny anarana hoe Trans-pterostilbene. Io simika io dia nanaporofo ny hampihenana ny fivontosana, ny fihenan'ny kognitif, ary ny fanamafisana ny siram-ra. Ao amin'ny fanadihadiana vivo sy amin'ny vitro dia manohana ny fiantraikan'ny fisorohana sy ny fitsaboana Pterostilbene. Io zavatra simika io dia miasa ihany koa toy ny mimétra restraine caloric, izay mandrisika ny vatana hamoaka ny biochemical, anisan'izany ny adiponectin izay manalefaka ny fizotran'ny fahanterana nefa mampiroborobo ny fanasitranana.
Ity suplement anti-fahanterana ity dia malaza amin'ny fiarovana amin'ny aretina mifandraika amin'ny taona, ka manitatra ny halavan'ny fiainana. Ao amin'ny rodents, ny fatra kely amin'ireto simika simika ireto dia mihena ny soritr'aretina mifandray amin'ny fahanterana. Ny fanadihadiana dia nanolo-kevitra fa ny fihinanana be dia be ny loharanon-tsakafo pterostilbene toy ny blueberry dia mety hanemotra ny olana ara-pahasalamana mifandray amin'ny fahanterana, anisan'izany ny dementia sy ny homamiadana.
4. Pterostilbene sy resveratrol
Tsy isalasalana fa mifandray akaiky ny Pterostilbene sy resveratrol. Resveratrol dia fantatra amin'ny anarana hoe simika bioactive amin'ny divay mena sy ny voaloboka.
Ny tombotsoan'ny fahasalaman'ny resveratrol dia mitovy amin'ny Pterostilbene ary misy fiarovana amin'ny alzheimer, fiantraikany antikankaretina, fampitomboana ny faharetan'ny angovo, fihenan'ny fanoherana mamaivay, mety ho fanoherana ny diabeta, ary tombony amin'ny aretim-po.
Ny pterostilbene dia tena simika mitovy amin'ny resveratrol, saingy ny fanadihadiana dia efa nitatitra fa ny Pterostilbene dia mety mahery kokoa noho resveratrol amin'ny fitantanana ny toe-pahasalamana sasany. Pterostilbene dia naneho fahaiza-manao bebe kokoa amin'ny fampitomboana ny fiasan'ny kognitif, ny fahasalamana krizy, ary ny fatran'ny glucose.
Ny fiainana antsasaky ny pterostilbene dia fohy kokoa noho ny antsasaky ny fiainana amin'ny resveratrol. Pterostilbene raha ny tena izy dia inefatra haingana kokoa noho ny rafitry ny fandevonan-kanina ho an'ny vatana noho ny resveratrol. Amin'ny ankapobeny, io dia mety mahatonga Pterostilbene mahomby kokoa imbetsaka noho ny resveratrol. Na izany aza, mila mandinika bebe kokoa ny fanatanterahana azy.
Pterostilbene sy resveratrol koa indraindray mitambatra mba hanome goavambe mitambatra ao anaty endriky ny kapsul. Ny mitambatra mitambatra dia heverina fa mahery kokoa satria mampifangaro ny soa azo avy amin'ny sangan'ady roa.
5. Pterostilbene fanampiny
Tsy misy isalasalana fa raha te-hahatanteraka ny tombontsoa azo avy amin'ny Pterostilbene, dia manoroana azy handray azy io ianao ho fanampin'ny vovon-dronono. Ny tambiny Pterostilbene amidy amina fivarotana sakafo voajanahary marobe sy any amin'ny magazay an-tserasera izay manampahaizana manokana amin'ny hanina ara-tsakafo. Azonao atao koa ny mahita an-tserasera pterostilbene mpanamboatra amin'ny Internet.
Ny fanampin-tsakafo Pterostilbene dia misy amin'ny endrika capsules, ary misy fatra isan-karazany. Tokony hamaky tsara ny mari-pamantarana na ny mari-pamantarana ianao ary mariho ny habetsaky ny Pterostilbene ao anaty kapoakany alohan'ny mividy azy io. Zava-dehibe izany satria mety tsy hitovy ny doka samihafa.
Ary koa, ny fatran'ny pterostilbene sasany dia mety avo kokoa noho izay nohadihadiana tamin'ny olombelona. Ny fatra fatra mahazatra indrindra misy eo anelanelan'ny 50 mg sy 1,000 mg isaky ny kapôty.
Araka ny efa voalaza teo aloha dia azo alaina ihany koa ny fanampim-bidy mitambatra, miaraka amin'ny fangalarana malaza indrindra dia Pterostilbene sy resveratrol. Ny pterostilbene dia natambatra ihany koa amin'ny curcumin, dite maitso, astragalus, ary ireo sôkôla voajanahary hafa.
Azonao atao ihany koa ny mahita crème sunblock izay misy Pterostilbene na dia tsy fahita firy aza izany. Ny haben'ny Pterostilbene ilaina amin'ny fiarovana anao amin'ny homamiadan'ny hoditra dia tsy nianarana, nefa afaka manome fiarovana fanampiny.
6. Aiza no hahitana ny vovo-dronono Peterostilbene ambony indrindra?
Raha mitady vovony pterostilbene avo lenta amidy ianao, dia eo amin'ny toerana mety. Iray amin'ireo mpanamboatra pterostilbene malaza sy mahay ary za-draharaha any Sina izahay. Manome vokatra madio sy feno fonosana izahay, izay andramana foana amin'ny laboratoara sokajy tontolo iray mba hahazoana antoka ny fahadiovana sy ny fiarovana. Manome baiko hatrany manerana an'i Etazonia, Eoropa, Azia ary faritra hafa eran-tany isika. Ka raha te hividy vovony pterostilbene ny kalitao avo indrindra azo atao, dia ifandraisa anay izao izao.
Rimando AM, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004). "Resveratrol, pterostilbene, ary piceatannol amin'ny voaroy voaroy". J Agric Food Chem. 52 (15): 4713–9.
Kapetanovic IM, Muzzio M., Huang Z., Thompson TN, McCormick DL Pharmacokinetics, bioavailability am-bava ary ny mombamomba ny resveratrol sy ny antitra dimethylether, pterostilbene, amin'ny voalavo. Chemother. Pharmacol. 2011, 68: 593-601.
Ny fiarovana ny synt synt trans ‐ resveratrol ho toy ny sakafo novelarina araka ny lalàna (EC) No 258/97 ″. EFSA Journal. Manam-pahefana momba ny fiarovana ara-tsakafo eropeana, tontolon'ny EFSA momba ny vokatra momba ny dietika, ny sakafo mahavelona ary ny alika. 14 (1): 4368
Becker L, Carré V, Poutaraud A, Merdinoglu D, Chaimbault P (2014). "Fandefasana spektrometrika MALDI faobe ho an'ny toerana miaraka amin'ny resveratrol, pterostilbene ary viniferins amin'ny ravina grapevine". Molekiola. 2013 (7): 10587–600.
1.Inona ny Pterostilbene?
2. métriseurbene mekanika asa
4.Pterostilbene sy resveratrol
6.Aiza no hahitana ny vovo-dronono Peterostilbene ambony indrindra?